XAMPP ဆိုတာဘာလဲ - What Is XAMPP? - နည်းပညာ
XAMPP ဆိုတာဘာလဲ – What is XAMPP?
-Xampp ဆိုတာ ဘာလဲ?
-Xampp ရဲ့ long form က ဘာလဲ?
XAMPP ဆိုတာ အတိုကောက် စာလုံး ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အရှည်ကတော့-
A = Apache HTTP server
P = PearlX = Cross ဆိုတာကတော့ cross platform ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ cross platform ဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ Microsoft က ထုတ်တဲ့ windows, Apple က ထုတ်တဲ့ Mac OS X နဲ့ အခြား Linux နဲ့ Solaris OS (operating system) တွေထဲက ဘယ် OS မှာမဆို တင်လို့ရတယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။
A = Apache HTTP server ဆိုတာကတော့ web hosting တွေမှာ သုံးတဲ့ server software ဖြစ်ပါတယ်။ အခု XAMPP ဆိုတာကလည်း ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်စက်မှာ web server တစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက် သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ web server လုပ်မယ်ဆိုလို့ အင်တာနက်ပေါ်မှာ တစ်ကယ်သုံးတဲ့ server မျိုးဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ virtual web server (web server ကိုယ်ပွား) ပါ၊ တစ်ကယ်သုံးလို့မရပဲ ဘာလို့တင်မှာလဲလို့ မေးစရာရှိပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းကို XAMPP ထဲက နောက်ဆုံး P နှစ်လုံးကို ရှင်းပြတဲ့အချိန်မှာ ဖြေပါမယ်။
M = MySQL ဆိုတာကတော့ database (db) language တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ database က website တစ်ခုအတွက် အလွန်အရေးပါတဲ့ အရာတစ်ခုပါပဲ။ ဘယ်လိုအချိန်မျိုးမှာ db ကို သုံးလဲဆိုတော့၊ website တစ်ခုက အကြောင်းအရာတွေကို အလိုလျှောက် သိမ်းထားဖို့ လိုပြီဆိုရင် db သုံးပါတယ်။
နောက်ထပ် P နှစ်လုံးကတော့ တစ်ခုက PHP ဖြစ်ပြီးတော့ နောက်တစ်ခုက Pearl ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ခုလုံးက programming language ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ programming language တွေက server (hosting) လိုအပ်ပါတယ်။ server မရှိရင် run လို့မရပါဘူး။ ဒါတွေ run ကြည့်ဖို့၊ လေ့လာဖို့ တစ်ကယ့် server ဝယ်မယ်ဆိုရင် ကုန်ကျစရိတ် များမယ်၊ အင်တာနက်ပေါ်ကနေ လုပ်ရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ connection နဲ့ဆို နှလုံးရောဂါကုဖို့ ဆေးဖိုးပါထပ်ကုန်မယ် 😛 ။ အဲဒါကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ စက်ထဲမှာပဲ virtual server (server အတု) တင်ပြီးတော့ စမ်းသပ်မယ်ဆိုရင် အားလုံးအဆင်ပြေသွားတာပေါ့။ အနီးစပ်ဆုံး ဥပမာကို ပြရရင်တော့ Myanmar Web Designer က လက်ရှိ SEO Services ပေးနေတဲ့ Singapore SEO Service website က joomla CMS(content management system) ကို အသုံးပြုပြီးတော့ ရေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမျိုး website မျိုးဆို အရင်ဆုံး ကိုယ့် ကွန်ပျူတာထဲမှာ အရင်ဆုံး အပြီးအစီးနီးပါးလောက် ပြင်ဆင်ပြီးမှ အွန်လိုင်းပေါ်တင်ကြတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမျိုး joomla တင်မကပဲ wordpress, drupal အစရှိတဲ့ အခြားသော PHP ကိုအသုံးပြုပြီးရေးရတဲ့ website တွေနဲ့ Pearl language ကို အသုံးပြုပြီး ရေးရတဲ့ website တွေအတွက်ဆို hosting လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့က hosting ပေါ်မှာပဲ run နိုင်တဲ့ language တွေမို့လို့ပါ။
XAMPP ကို ဘယ်က ရယူပြီး install လုပ်နိုင်မလဲ?
အမျိုးမျိုးသော OS တို့အတွက်
Windows OS အတွက်
http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html (လိုအပ်သော installation package ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်)
http://www.apachefriends.org/download.php?xampp-win32-1.8.1-VC9-installer.exe (ဘယ်ဟာ ဒေါင်းရမယ်ဆိုတာ ဇဝေဇဝါ ဖြစ်နေသူများအတွက် တိုက်ရိုက် ဒေါင်းလုဒ်လင့်ခ်)
နောက်သင်ခန်းစာမှာတော့ XAMPP ကို ဘယ်လို install လုပ်ရမယ်ဆိုတာ ရေးသားပါ့မယ်။
← SEO သင်ခန်းစာ – SEO tutorials | Ranking, Pagerank, On Page SEO, Off Page SEO Website title tag optimization – Myanmar SEO Tutorials →
4 thoughts on “XAMPP ဆိုတာဘာလဲ – What is XAMPP?”
Thank u so much pr 😛
Me thite says:
Apacheဆိုတဲ့ HTTP server မှာ တင်မယ်ဆိုရင်ကောဗျ
MyoWin on HTML5, CSS3 ဖွငျ့ website ရေးနညျး အပိုငျး (၆+၇)
MyoWin on Website ရေးနညျး HTML+CSS (အပိုငျး ၂)
Phyoe Kyaw Oo on Website ရေးနညျး HTML+CSS (အပိုငျး ၂)
Mg Mg Thwin on PHP Tutorials For Beginner (Part -1 )
မိုးပိုငျးဖွိုးပါ on Website ရေးနညျး HTML+CSS (အပိုငျး ၂)